ဘော်စတွန်ဒိုင်းနမစ်ကစက်ရုပ်တီထွင်မှုအသစ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည် Gadget သတင်း
Juan Luis Arboledas | | စက်ရုပ်
ယခုအခါသင်သည်စက်ရုပ်လောကကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးအထူးသဖြင့်စက်ရုပ်လောကနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပတ်တိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းကောင်းအားလုံးနှင့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားဖြစ်လိုသည်ကိုသိလိုလျှင်သေချာသည်။ Boston Dynamicsထိုအချိန်ကစက်ရုပ်လောကတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သောနည်းပညာနှင့်တိုးတက်မှုများကြောင့်ဂူဂဲလ်မှဝယ်ယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲထိုအချိန်က၎င်းနှင့်စီးပွားရေးအရအသုံးမ ၀ င်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးသောအခါ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအနည်းဆုံးထိုအချိန်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းသူကရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီကံဆိုးတဲ့နည်းနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးအဲဒီအချိန်ကကျွန်တော့်ကိုထင်ခဲ့မိတယ်၊ Boston Dynamics သည် SoftBank သို့သွားသည်.
ဤမျှော်လင့်မထားသောလှုပ်ရှားမှုကြောင့် Boston Dynamics သည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိသည်မှာအတိအကျဖြစ်သည်။ ၎င်းစီမံကိန်းများသည်များသောအားဖြင့်၎င်း၏စီမံကိန်းများသည်ဝေးလံစွာရှေ့ဆက်နေသောကြောင့်နည်းပညာအသုံးအနှုန်းများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်သင့်သည်မှာသေချာသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ကျန်ကနေ။ အကယ်၍ သင်သည် Boston Dynamics ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အမြန်ရှာဖွေလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏အမည်သည်သင့်အတွက်ဘာမျှမထူးခြားနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်း၏စက်ရုပ်များအထူးသဖြင့်၎င်းအားပြုလုပ်သည်။ လေးခြေထောက်သတ္တဝါများ သူ၏ကြီးမားသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဟန်ချက်ညီမှုသည်နည်းပညာစာမျက်နှာများနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များကိုပင်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဤအခါသမယတွင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်သတင်းကိုမသိခဲ့သည့်လပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်သူတို့သည်နှစ်ခြင်းခံပြီးသည့်နှစ်ကလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသူတို့၏နောက်ဆုံးစီမံကိန်းကိုတင်ပြရန်တာဝန်ရှိသည်။ SpotMini.
1 Boston Dynamics သည်လအနည်းငယ်သာသတင်းမပို့ဘဲ SpotMini ဟုခေါ်သည့်စက်ရုပ်ခွေးတစ်ကောင်အကြောင်းပြောပြသည်။
2 SpotMini ကိုသက်ရှိများပေးသောစီမံကိန်းတစ်ခု၏သိလိုစိတ်များကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။
Boston Dynamics သည်လအနည်းငယ်သာသတင်းမပို့ဘဲ SpotMini ဟုခေါ်သည့်စက်ရုပ်ခွေးတစ်ကောင်အကြောင်းပြောပြသည်။
Boston Dynamics သည်ဤစီမံကိန်းအားသတ်မှတ်သည့်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုပ်ခွေးတစ်မျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည် ၎င်း၏အကြီးဆုံးမော်ဒယ်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကို BigDog ဟုခေါ်ကြသည်။ အမှန်တရားကတော့စက်ရုပ်ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့စက်ရုပ်တစ်ကောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်ဒီစက်မှာသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားစက်ရုပ်တွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မှာလိုအပ်တဲ့နည်းပညာရှိတယ်ဆိုတာပြသနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့နှင့်ပင်ပို။ ကျွမ်းကျင်မှု.
မျိုးဆက်သစ် SpotMini ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုမှာလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၎င်းတို့သည်တပ်ဆင်ထားသည့်ပထမဆုံးမော်ဒယ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ ဦး ခေါင်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစက်ရုပ်လက်မောင်း (အမှန်တရားကနည်းနည်းထူးဆန်းတာပဲ) စက်ရုပ်ပဲ လှုပ်ရှားမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုပြီးခေတ်ရဲ့သွက်လက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Boston Dynamics ကိုယ်တိုင်၏အဆိုအရစက်ရုပ်တွင်ယခုခေါင်းတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်ကင်မရာနှင့်မီးများရှိသည်။
ဤစီမံကိန်း၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်နောက်အချက်တစ်ချက်ကိုဗေဒင်အဆင့်တွင်တွေ့ရသည်။ ထိုဒီဇိုင်းများအားလုံးနှင့်ကွဲလွဲနေသည် 'အဝတ်မပါသောBoston Dynamics ကအမြဲတမ်းလောင်းကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနက်ရောင်ပလပ်စတစ်နဲ့သတ္တုတွေဝတ်ထားတဲ့စက်ရုပ်တွေအားလုံးကိုငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ခဲ့တယ်။ SpotMini ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုံရိပ်များ (သို့) ကျွန်ုပ်ပို့ထားသောဗီဒီယိုတွင်တိုးချဲ့စာမူ၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသည်။ သင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအားလုံးဖုံးကွယ်ကြောင်းအဝါရောင်ထည် ၎င်းသည်အနည်းဆုံးမမြင်ရသောမျက်စိဖြင့်စက်ရုပ်ကိုပိုမိုဖော်ရွေသောရှုထောင့်ကိုပေးသည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤစက်ရုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာသို့မဟုတ်ဘာမျှမသိသေးပါ၊ ၎င်း၏တီထွင်သူများသည်ဖွင့်ပြရန်သင့်တော်ကြောင်းနှင့်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်ဖြစ်ပျက်မည့်တင်ဆက်မှုတစ်ခုအတွက်အစာစားခြင်းအဖြစ်၎င်းတို့ဖန်တီးသူများမြင်တွေ့ရသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ မှလွဲ၍ ဘယ်အချိန်မှာ Boston Dynamics ၏ဒါရိုက်တာများကောင်းစွာပြုလိမ့်မည် အားလုံး၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပိုပြီးနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များထုတ်ဖေါ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နည်းပညာ » စက်ရုပ် » ဘော်စတွန်ဒိုင်းနမစ်ကစက်ရုပ်တီထွင်မှုအသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည်
Airbus Vahana သည်ယခုအခါပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်